Uvavanyo lweWebinar (nge-14 kaSeptemba, 2020) -Umanyano lwaMazwe ngaMazwe okuBhala
Septemba 10, 2020 Elisabeth Akohlulwanga
Ngaba kuvavanywa ngaphandle kwendlu yakho yamavili yesiqhelo? Ngaba kubonakala ngathi ngumsebenzi omninzi kakhulu? Ngaba uyazibuza ukuba kutheni ezinye iinkqubo zifuna ukwamkelwa kwabahlohli babo? Ukuba kukho enye kwezi eyaziwayo, siyakukhuthaza ukuba wenze umculo ngoMvulo, nge-14 kaSeptemba xa uJennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies, kunye noShareen Grogan banikezela ngemizekelo eneenkcukacha zezinto abazenzayo kumaziko abo okubhala. Phawula ikhalenda yakho ngexesha lakho kwaye usijoyine!
Ngo-11 ekuseni nge-Pacific
1 PM embindini
2 PM EMpuma
Onke amalungu e-IWCA amkelekile ukuba ajoyine, ke nceda ukhululeke ukumema abahlobo bakho. Esi siseshoni sokufika nesokuhamba; ukuba ungaya kuphela kwinxalenye yewebhu, wamkelekile ukuba usijoyine. I-webinar iya kwenzeka ngo-Zoom. Nceda unxibelelane noMolly Rentscher, Umququzeleli weNkqubo yokuLungelelanisa abaCebisi be-IWCA, malunga nekhonkco le-Zoom: mrentscher@pacific.edu